Shina: Fandraràna Ny Kolontsaina Shanzhai ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2018 2:44 GMT
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, lasa nalaza teny anivon'ireo mpampiasa aterineto ny fomba fiteny hoe Shanzhai. Noraisin'i Lao Meng ny fanapahankevitra hikarakara ety anaty aterineto ny Gala Shanzhai rehefa Lohataona. Na izany aza, noho ny tsindry tsy fantatra, nosakanana ny fanomanana an'ilay hetsika ary nangatahan'ny Fitantanam-panjakana misahana ny Tantara amin'ny Fampielezampeo sy ny Fahitalavitra (SARFT) ire fampahalalambaovao rehetra mba hitsahatra tsy hanao tatitra momba ny Gala Shanzhai.
Kanefa, mitohy miroso hatrany ny kolontsaina Shanzhai. Satria efa miha-manakaiky ny Gala ny 15 Martsa (3.15 晚會) karakarain'ny fandaharana natokana ho an'ny fanjifàna ao amin'ny fahitalavitra CCTV , mpikatroka iray mpiaro zon'olombelona, Zhang Hongfeng (張洪峰, no nanapaka hevitra ny hanao Gala Shanzhai ny 15 Martsa. Nolazain'i Zhang fa ho avoakany ny fanadihadiana iray nataon'ny ‘people’ (tao amin'ny people.com.cn) an'ireo mpanjifa momba ireo vokatra sandoka ao anatin'ny Gala Shanzhai.
Araka ireo tatitry ny vaovao avy ao an-toerana, nandritry ny fihaonan'ny CPPCC, mbola nandroso sosokevitra 7 hafa i Ni Ping mba hanakànana ny kolontsaina Shanzhai, ary nolazainy fa (tao amin'ny Tianya forum):